Usapho lwakho lufumene lo mqondiso omncinci kunye nomhle, nje nge-dwarfish ukuba iTyrier? Yimangalisa! Kodwa ujamelene nombuzo wendlela yokunyamekela isantya saloo nto, kufuneka ufunde le nqaku.
Isidalwa esinjalo esibonakala ngathi sincinci sidinga ukunakekelwa okuninzi, kungakhathaliseki ukuba kuyintoni na isondo. Yaye loo nto ifuna ukuhambelana nokunyamekela. Ukunyamekela i-toteriors ezincinci kunokuba ngethuba elinye kwaye ngokukhawuleza, kwaye akunjalo, njengoko bengayifuni ingqwalasela kuphela, kodwa nexesha.
Indlela yokuhlamba umntwana?
Ukunyamekela i-terrier encinci ibandakanya inkqubo yokuhlamba, okungafuneki ukuba yenziwe kwansuku zonke; oku sele kuninzi. Ukubandakanyeka kwinkqubo enjalo, njengokuhlamba, kuyimfuneko kwinkqubo yokungcola inja. Kodwa imihla ngemihla uyakwazi ukuhlamba i-paws, emva kwesinye ukuhamba, ukwenzela ukuba i-terrier ayikunikezeli ubunzima obungadingekile ngokucoca indlu. Ewe, kwaye ukhumbule ukuba ukuhlamba ngokugqithiseleyo kunokukhokelela kwimiphumo enobungozi njengokomisa isikhumba kunye nokukhwabanisa. Kuya kuba ngcono ukuba ungagcini kwiindlela ezizodwa zokuhlamba isilwanyana sakho kwaye usetyenzise kuphela amanzi afudumeleyo (kumanzi apholileyo kunokwenzeka ukuba ubambe iqhwa lelokhu). Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba emva kokusetyenziswa kwamaconsi kwiintambo, inkqubo yokuhlamba inja kufuneka ihlehliswe iintsuku ezimbalwa ukuze igalelo layo lichaneke. Emva kwakho konke, kulungile ukunyamekela i-terrier, ukuze anike uvuyo kuphela.
Sinyamekela i-paws neendlebe.
Udinga ukunyamekela i-paws kunye ne-paws, ngokukodwa, ukusika izipikili ukwenzela ukuba ingenasiphako kwicala elingalunganga lonyawo ngenxa yezikhonkwane ezinde, ezinokukhokelela ekukhawuleni kwemilenze yenja. Ukuze uzonqunyulwe ngokufanelekileyo izipikili zeenja, kuyakufuneka ukuba ulungise unyawo lwawo ukuze ubone umbono walo ohlangothini kwisipikili. Lapho isikhonkwane siqala ukugoba, kwaye siya kuba yindawo yokusika. Ukuba xa ukhathalela isilwanyana esinezilwanyana, oko kukuthi i-terrier, kwakungekho zikhwama ngexesha lokusika izipikili, ingaqhelana nokukhuthazwa, ngendlela ye-tidbit emva kokusika zonke iispiki.
Ngokuqinisekileyo inkqubo ebalulekileyo ekunyamekeleni isilwanyana esinezilwanyana ziya kucoca iindlebe, njengoko zibonakala kwi-sulfur eqokelelweyo. Baya kuhlambuluka kwaye bancedwe ngamatye aqhelekileyo. Futhi ungawafaki kakhulu kwiindlebe ze-terrier yakho, kuba akunzima ukulimaza indlebe yakhe. Ukunyamekela loo ndawo, ngokukodwa, ukucocwa kweendlebe, kuya kwenziwa emva kweenkqubo zamanzi.
Akungabazeki ukuba inkqubo ebalulekileyo kule nja encinci iya kukunyamekela amazinyo akhe. Nangona le nto ayinakuyenza imihla ngemihla, efuna ukuncedwa ngama-bhisikidi akhethekileyo okanye nje ukuyihlambulula nge-brush engahambelaniyo, kodwa kuyimfuneko ukuhlambulula ngezikhathi ezithile, ukuze ungahlangabezane neengxaki ezifana ne-tartar kwi-terrier. Ngokuxhomekeke ekubunjweni kwe-saliva, kunye nokutya okunikezelwa yilwanyana, isantya sokuxubha isilwanyana esilula siya kuxhomekeka kuyo. Ngexesha elifanelekileyo kubalulekile ukubonisa umdlalo wakho wokudlala umdlali wezilwanyana ukuze ungabhekana neengxaki ezinjalo kwisilwanyana sakho esilulayo kwixesha elizayo, njenge-tartar.
Ingxaki ebalulekileyo iya kuba yinto enxulumene namazinyo obisi, ngenxa yokuba ayayi kuphuma kuloo mhlaba, kuba iingcambu zamazinyo ezinjalo azikwazi ukuzicombulula. Abanye abanikazi bamanqwanqwa angama-terriers bakhetha ukubanika iingcali ukuze bazisombulule le ngxaki ngabantu abanolwazi. Kwaye ezinye zazo zikhetha ukuxazulula ingxaki ngamatye enkcenkceshe yalaba bantu abancinci, ngenxa yokuba kwezinye iikliniki ezikunceda ekunyamekeleni izinja ezincinci, kunye nazo zonke izifuyo ezifuywayo, zikhona izidakamizwa zentlungu. Kwaye oku kunokuchaphazela impilo yezilwanyana ezifuywayo.
Inkqubo yokususa amazinyo ebisi kwiindawo ezincinci zalawo mafutha angenziwa kwiimeko zasekhaya eziqhelekileyo. Emva koko, izinto ezifunekayo ukusebenza ngamazinyo zifumaneka kwiikhabhinethi yonyango kunye nekhabhinethi yomphathi. Ezi zibandakanya abaqwengqo bemiqolo, ngakumbi naziphi na izinto ezikhulayo kunye neziqu ezincinci eziphambili, ezingenakunzima ukuzithenga kwivenkile, iifampu zi-marbles, izidakamizwa ze-lidocoin okanye i-novocaine, kwaye ke, ukuzithemba nokuzimisela.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba akudingeki ukuba wenze izigqibo ngokukhawuleza malunga nokudonsa amazinyo kwi-terrier yakho, kufuneka uqinisekise ukuba kuyimfuneko ukukhusela ukulimala kwilwanyana lakho. Kubalulekile ukukwazi ukubona ama-hillocks emhlophe emhlabathini ngaphantsi kobisi, okuya kubonisa ukuba ixesha lokususwa kwamazinyo lifikile kwaye kungekudala endaweni yabo kufuneka ibonakale iinjongo ezizaliswe ngamazinyo.
Ngaphambi kokuba uqale ukusebenza ngamazinyo akho omntwana, qiniseka ukuba abaqambi becandelo basebenze ngokufanelekileyo, ngokukodwa ukuba iziphathamandla zabo zineenkcukacha ezifunekayo kwaye abayi kukwazi ukutshiza ezandleni zenu ngexesha lomsebenzi. Emva koko, udinga i-swab-tamped swab ehambile ngesilwanyana esilungisiweyo se-novocaine okanye i-lidocaine, ukuyixhoma kwithuba elithile kwi-dog. Kuya kuba yinkqubo ye-anesthetic yendawo, engayinikanga ingxaki kumsebenzi wezilwanyana. Kufuneka ukuba uzame ukuphuka ngendlela enokuthi ukunyakaza kwayo kubaluleke kakhulu kwaye kucace. Ukuba ufuna ukuphinda le nyathelo, ungesabi ukwenza kwakhona, uzame ukulimaza i-gum yakho.
Ukususwa kwekhaya kweeinki ezingabalulekanga zobisi kukulungele ukuba akukho-anesthesia esetyenziswa kwiiklinikhi.
Iingcebiso ezilula zokunyamekela abo bantu.
Ukongeza kuzo zonke ezi ngasentla, kuya kubakho iingcebiso ezimbalwa, okuqala malunga nokuhamba. Eli nyathelo luza kuqhuba kangcono kwi-harness. Yintoni enokuyichukumisa into enjalo, njengokuba kungenjalo ukubunjwa okulungileyo kwamalungu omnxeba wakho. Inqaku lesibini elibalulekileyo kukuba akufanele ushiye isilwanyana sakho kwisitrato singakhange sijonge, kubonakale kungabonakali. Ingongoma yesithathu kukuba xa kukho ukungathandabuzeki malunga nempilo ye-terrier, kungcono ukugoba kunye nokubuyela kwingcali ukuphepha ukungonakaliswa.
Iingcebiso ezinjalo ezinokuthi zinokukunceda ukunyamekela ngokufanelekileyo i-terrierfish yakho.
Indlela yokulahla iphunga lekati kwindlu?
Izilwanyana zimbi kwimpilo
Unokunyamekela njani onogwaja bokuhlobisa
Izinzuzo zezilwanyana zasekhaya
Izifo zeFrench Bulldogs
Ukutya - ingozi okanye inzuzo?
Iingcamango zesondo zesintu ngokuqhelekileyo
Iphepha lokunakekela izibhedlele
Izibhinqa ezimnandi zezilwanyana
I-pizza kunye ne-sausage
Imbewu ye-sunflower: izakhiwo ezincedo
Unokukunceda njani umntwana wakho alungiselele umsebenzi wesikolo
Iitartlets nge-orange cream kunye ne-kiwi
Caviar - othandekayo kunye neendwendwe ezihambelayo
Cherry kwi-cherry ekhangayo
I-tomato pie nge-asparagus